Somaliland: Ergada Somaliland kasoo Jeeda ee Muqdisho u Lacag tagay oo Xadhig iyo Jidh-dil kala Kulmay Doorashadii Dalka Soomaaliya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Ergada Somaliland kasoo Jeeda ee Muqdisho u Lacag tagay oo Xadhig...
Qaar ka mid ah ergooyinka Soomaaliya u tagay inay doortaan Xildhibaanada Matalaya Somaliland oo shalay ku mudaharaaday magaalada Muqdisho ayaa la xidhxidhay, halka qaar kalena la garaacay.
Ergooyinka ayaa ka cabanayay wax isdabamarin iyo afduub loo gaystay qaar ka mida Salaadiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya, Waxay sidoo kale ka cabaayeen habdhaqanka guddiga doorashada ee gacanta ku haya xubnaha matalaya Somaliland ee uusoo magacaabay Guddoomiyaha Barlaamaanka Soomaaliya Jawaari.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada Soomaaliya Cumar Dhagay, ayaa sheegay in go’aan ku ay gaadheen in dib loogu celiyo doorashadii jimcihii dhacday ee ay dadkani ka cabanayaan, taasi oo lagu tilmaamay mid aan waafaqsanayn xeerka doorashadda dalkaasi Soomaaliya.
Gabagabadii, Xubnaha Aqalka hoose ee maqaar saarka ee matalaya Somaliland oo tiradoodu dhan tahay 46 kursi, ayaa ilaa hadda waxaa la doortay 19 kursi oo ay ku jiraan kuraastii jimcihii la doortay oo la sheegay in la musuqmaasuqay, waxaana dhiman 27 kursi oo aan weli lagu tartamin. Sidoo kale waxaa weli lagu tartamin kuraasta aqalka sare ee Baarlamaanka oo doodi ka taagan tahay labo xubnood oo ka soo jeeda Sool iyo Sanaag.